कामदारको बीमा शुल्क पनि अनलाइनबाटै
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले तिर्ने बीमा बापतको रकम विना अतिरिक्त शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न इ–सेवा, फोनपे र वैदेशिक रोजगार विभागबीच शुक्रबार सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालका अनुसार इ–सेवाले बीमा शुल्कको रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । त्यस्तो रकम प्रत्येक दिन म्यादी बीमा जारी गर्ने कम्पनीले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
इ–सेवाले कामदारको म्यादी बीमा भएको जानकारी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने छ । बीमाको बीमाङ्क रकम भुक्तानी भए नभएको रूजु गर्न पोर्टलको व्यवस्था मिलाउने छ । प्राविधिक कारणले सेवा अवरूद्ध भएको अवस्थामा पनि सो समस्या तत्काल समाधान गर्न दुबै पक्षले पहल गर्ने महानिर्देशक डा. भूसालले बताए ।
अब बीमा कम्पनीहरूले विभागसँग सम्झौता गर्ने वित्तिकै बीमा वापतको रकम इ–सेवाबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने कल्याणकारी कोषको रकम पनि इ–सेवाबाट भुक्तानी गर्न सम्झौताको तयारी भइरहेको विभागले बताएको छ ।
अन्य अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले पनि आइतबार विभागसँग सम्झौता गर्ने तयारी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।